Kufunwa owesifazane "othumbe" ingane - Ilanga News
Home Izindaba Kufunwa owesifazane “othumbe” ingane
Kufunwa owesifazane “othumbe” ingane
Ucele ukusiza unina wesisulu obephethe nenye ingane
LUPHELE kabuhlungu uhambo lowesifazane waseMganwini, eHluhluwe, lokuyobona uyise wezinga-ne zakhe eThekwini ngoMgqibelo njengoba owesifazane abehleli naye etekisini egcine ethumba indodana yakhe.
Kunzima nokukhuluma kuMnu Msizi Dhlomo, onguyise kaSibusiso Nzama, ononyaka nenyanga ubudala, njengoba bengazi nokuthi bazophuma babhekephi uma bethungatha lona wesifazane oso-lwa ngokumthumba.
Ekhuluma neLANGA uMnu Dhlomo, uthe ubelinde uNkz Xolile Nzama (27), ongunina wezingane zakhe, eThekwini, esuka eMganwini.
Uthi uNkz Nzama ugibele nalona wesifazane obefake ingubo ebomvu etekisini, naye eya eThekwini. Ngenxa yokuthi ubephethe kabi, ehamba nenye yezingane zabo enezinyanga eziwu-6 ubudala, ephethe nezimpahla, lona wesifazane ucele ukumphathisa uSibusiso.
“Ngenxa yokuthi unina wezingane ubephethe izikhwama nengane encane, uthi lona wesifazane ucele ukumsiza ngokumphathela lona ononyaka, kwazise bebehleli etekisini eyodwa. Uthi ihambile itekisi behleli bexoxa, kungekho okusolisayo endleleni. Bathe sebefika eThekwini, behla etekisini unina wezingane wakhipha umakhalekhukwhini engishayela ucingo ukuze ngibahlangabeze erenki njengoba besihlelile.
“Uthi lona wesifazane ubemi emuva kwakhe ngesikhathi ekhuluma nocingo, okuthe eseqedile ubengasabonwa nendodana yami. Ngifikile kubona sabheka, kodwa kwanhlanga zimuka nomoya,” kusho uMnu Dlomo. Uthi selokhu kwenzeke lesi sigameko akabuthi quthu.
Uthi ngesikhathi lona wesifazane ethatha ingane, ubefake ingubo ebomvu kanti indodana yakhe ibifake ibhulukwe le-jean e-blue, yijakhethi yakhona, isikibha esimhlophe namateku amnyama.
“Indodana yami inomthungo esinyeni, kwazise ibisanda kubuya esibhedlela iyohlinzwa. Besicela kunoma ngubani ongaba nolwazi noma oyibonile indodana yami noma lona wesifazane ukuba axhumane namaphoyisa. Sikhathazeke kakhulu siwumndeni,” kusho yena.
UNkz Nzama, obezwakala ukuthi kunzima nokukhuluma, uthe namanje akakholwa ukuthi indo-dana yakhe ithathwe ngale ndlela. Uthi uzamile ukubheka yonke indawo nasezindlini zangasese lapho ehle khona nalona wesifazane, kodwa kwanhlanga zimuka nomoya.
“Namanje kangikholwa, ngisho ukudla akungeni njengoba ngingazi ukuthi ingane yami ikuphi. Angikwazi ngisho ukulala ebusuku,” kusho yena.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, uthi kuvulwe icala loku-thumba kanti amaphoyisa asaphenya.
Previous articleUshaye wachitha no-R93k wesitokofela
Next articleAmadodakazi abhokode abulala unina ngommese